NSA: Happy 4th Anniversary on 2nd December
Happy 4th Anniversary on 2nd December
ချမ်းမြမြ ဒီဇင်ဘာ၏မနက်အာရုံမတက်သေးခင် မီးလင်းနေသောအိမ်တစ်အိမ်ရှေ့သို့ ကားအဖြူ တစ်စင်း ဆိုက်လာသည်။ တိုက်ပုံအကျီအဖြူ၊ ပိုးပုဆိုးနက်ပြာရောင်ဝတ်ထားသောလူငယ်သည် ကားနောက်ခန်းမှ ဆင်းလာကာ တံခါးဖွင့်ထားသောအိမ်တွင်းသို့ တန်းဝင်သွားလေသည်။
ဧည့်ခန်းထဲက ခုံမြင့်ပေါ်မှာ အလှပြင်ဆရာမာမီ၏ အပြီးသတ် ပုဝါခြုံပေးခြင်းခံနေသော မိန်းကလေးသည် ကားဆိုက်ကတည်းက သိပါလျက် လူငယ်အိမ်ထဲဝင်လာမှ မျက်လွှာ ချထားရာမှ မော့ကြည့်ကာ ရှက်စနိုးဖြင့်ပြုံးပြသည်။ ဘေးမှာရပ်ကြည့်နေသော မိန်းကလေးနှင့် အသက်တူ ညီအစ်မဝမ်းကွဲ၊ လူငယ်၏သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သူ (အလှပြင်ဆရာငှားပေးသူ)က
"ဟေ့.... ညီညီ.. လှလား" ဟုလှမ်းမေးသည်ကို လူငယ်က မိန်းကလေးဆီမှ အကြည့်မခွာပဲ "အရမ်းလှတယ်" ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်။
ထို့နောက် ပိုးရင်ဖုံးအကျီအဖြူ၊ အဖြူခံမှာ နက်ပြာရောင်အချိတ်လုံချည်နှင့် အပြာနုရောင်ပုဝါပါး ခြုံကာ နောက်တွဲဆံထုံးထုံးထားသောမိန်းကလေးသည် သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးအပ်လိုက်သည့် အသွင်ဖြင့် သူ့ညာလက်ဖဝါးကို လူငယ်ကမ်းပေးသော ဘယ်ဘက်လက်ထဲထည့်၍ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကပ်မည့် ခေမာသီဝံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ အာရုံဆွမ်းကပ်အမီ ထွက်သွားကြတော့သည်။
နောက် ၄ နှစ်အကြာ
မနက်မိုးလင်း ကလေးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ် အဝတ်အစားလဲပေးနေသော အမျိုးသမီးသည် ညက facebook ကသူများ status မှာဖတ်ထားသော Sweet December တို့ ဒီဇင်ဘာည တို့ကို အိပ်ချင်မူးတူး တွေးနေရင်း တစုံတခုကို အမှတ်ရကာ အိပ်ရာထနောက်ကျ၍ ရေတက်သုတ်ရိုက် ချိုးနေရသူ ခင်ပွန်းကို
"ကို...ကို " (အလန့်တကြားအသံဖြင့်... ရေကျသံဆူနေသောကြောင့် အသံကိုထပ်မြှင့်သည်)
"ဟေ" (သူ့အသံကလည်း အလန့်တကြားပဲ ၊ ကလေးလွတ်ကျပြီများထင်သလားမသိ)
"ဒီနေ့ ၂ ရက်နေ့နော်"
"အေးလေ...ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်"
"ဒါဆို ဒီနေ့ ၄ နှစ်ပြည့်ပြီ" (ကျွဲမြီးတိုသံပါလာသည်။)
"ဘာ ၄ နှစ်ပြည့်တာလဲ"
"...................." (စိတ်ထဲမှ ဟင်း.... ဒါတောင်မမှတ်မိဘူး၊ ငါကကျ မှတ်မိရတယ်၊ facebook ကဖတ်ထားတာတွေ ပြန်တွေးရင်း... အဲလေ...............)
ရေချိုးခန်းထဲမှ ရေသံရော၊ စကားပြောသံပါ ခဏတိတ်သွားသည်။
"ဘာ ပြည့်တာလဲ ၊ ၄ နှစ်က" ( ရေချိုးခန်းတံခါးပွင့်လာကာ ဘုမသိ၊ ဘမသိပုံဖြင့် အမျိုးသား၏ရေစိုမျက်နှာပေါ်လာသည်။ )
"နင်နဲ့ငါနဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးတာ၊ နင်နဲ့ငါနဲ့ ရတာ၊ နင်နဲ့ ငါနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာ ၄ နှစ်ပြည့်တာဟေ့....." (အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်)
အမျိုးသားက အပြစ်လုပ်မိသူကဲ့သို့ ပြုံးရမလို၊ တည်ရမလို အိုးတိုးအတ ဘာပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်နေစဉ် အရေးကြီးသောနေ့ကို အရင်သတိရသောအမျိုးသမီး ကား အောင်နိုင်သူစတိုင်ဖြင့် ခပ်ဝင့်ဝင့် ။
ထိုစဉ် မွေ့ရာပေါ်မှာထိုင်နေသောကလေးက သူတို့ နှစ်ယောက်မျက်နှာကို တလှည့်စီကြည့်ကာ "တဟင်းဟင်း" မာန်မဲလေတော့သည်။ အဲဒီတော့မှ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး သမီးကို သတိရကာ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ပြိုင်တူ ထ ရယ်မိတော့သည်။
(သမီးသည် သူ့ရှေ့မှာ လူ နှစ်ယောက် စကားအပြန်အလှန် ခပ်ကျယ်ကျယ်ပြောတိုင်း မကြိုက်သည့်အမူအယာပြသည်။ တဟင်းဟင်း မာန်မဲတတ်သည်။ )
♥♥♥၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂ရက် လေးနှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရ♥♥♥
မင်္ဂလာသက် ၄ နှစ်ရှိတော့ ပြန်သုံးသပ်မိသည်။ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် နားလည်မှုပိုများလာတယ်။ ထားရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ နားလည်မှုဆိုတာ ခွင့်လွှတ်မှု၊ သည်းခံမှု တို့ကိုပါ ရောပြောလိုက်တာပါ။
တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် တခါတလေ စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်တတ်ကြပေမယ့် ကျွန်မကို အမြဲသည်းခံသော၊ သူချစ်တတ်သလို ချစ်သော၊သူ ဂရုစိုက်တတ်သလောက် ဂရုစိုက်သော၊ သူ အလိုလိုက်တတ်သလို အလိုလိုက်သော ချစ်ခင်ပွန်းကို ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါသည်။
Posted by NSA at 7:49 AM
Labels: မိသားစု, မောင်ကြီး
Dec 2, 2011, 9:09:00 AM
ဟမ်.. မြန်လိုက်ထှာ.. မပြီးခင်လာမန့်သွားတယ်ထင်တယ်..
Dec 2, 2011, 9:33:00 AM
Happy Anniversary!!!! :)
Dec 2, 2011, 3:56:00 PM
နင်နဲ့ ငါနဲ့ ရတာ ဟိဟိ...
Dec 2, 2011, 5:43:00 PM
3 Dec 11, 09:59 AM
RITA: ကို ... ကို ဆိုပါလား လား လား
RITA: မောင်ကြီး မောင်ကြီးနဲ့ ရေးတော့ 'မောင်' လို့ခေါ်တယ် မှတ်နေတာ။'
Dec 2, 2011, 6:03:00 PM
အဲလိုသတိပေးရတတ်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အများကြီးချစ်ပါတယ်မို့လား...
ကို...ကို ဆိုတာ ကို တစ်လုံးခေါ်ပြီးရေသံနည့်မကြားလို့ နောက်တစ်လုံးထပ်ခေါ်တာလား... ဒါမှမဟုတ်နှစ်လုံးတွဲလားရှင်းအောင်ရေးပါ..
Dec 4, 2011, 11:19:00 AM
Dec 4, 2011, 11:38:00 AM
နှစ်တစ်ရာတိုင်ပါစေ မေတ္တာမယိုင်သလေ.. :D
Feb 24, 2012, 1:38:00 PM
Thandar Lwin said...
အဲဒီအချိန် ခင်နေပြီ ကို လာလာဖတ်နေတာ ဒီပို့စ် တက်တာ ဘာလို့မသိပါလိမ့် လို့ ...း) တို့လဲ ဒီဇင်ဘာ မှ လက် မှတ်ထိုးတယ်ထင်တယ် ..ကြာပြီဆိုတော့ ပြန်ကြည့်မှ အမှတ်ရတော့တယ် .ဟီးဟီး
Jun 12, 2012, 1:18:00 AM
Miss Universe Myanmar 2018 ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ National Costume Competition & National Gift Auction ပွဲမြင်ကွင်းများ
တပိုင်တနိုင် သာသနာပြုရအာင်
ဓမ္မဆုံချက် BY DR. MYO
သန့်၊ တည်၊ ပွား
အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ဆရာတော်၊အားလုံးကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း၊ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံကြပါစေ...
အောင်မင်းခေါင်ကုန်းမြေ ဓမ္မရိပ်သာ (ကသစ်ဝိုင် ၀ိပဿနာ)
Blog Archive Feb 08 (1) Feb 13 (1) Jan 29 (1) Jan 24 (2) Jan 21 (1) Jan 19 (1) Sep 21 (3) Jul 26 (1) Jul 24 (1) Jul 23 (1) May 16 (1) Sep 03 (2) Jul 14 (2) Sep 21 (1) Jul 06 (1) Mar 17 (1) Mar 12 (1) Jan 24 (1) Jan 21 (1) Dec 31 (1) Dec 17 (1) Dec 12 (2) Dec 01 (1) Nov 17 (1) Sep 24 (1) Apr 27 (1) Apr 09 (1) Mar 14 (1) Feb 16 (1) Feb 02 (1) Jan 18 (1) Dec 24 (1) Dec 21 (1) Dec 02 (1) Nov 23 (2) Nov 12 (1) Oct 29 (1) Oct 24 (1) Oct 16 (1) Oct 12 (1) Oct 11 (1) Sep 27 (1) Sep 10 (1) Aug 26 (1) Jul 30 (2) Jul 19 (1) Jul 07 (1) Jun 27 (1) Jun 25 (1) Jun 21 (1) Jun 18 (1) Jun 03 (1) May 26 (1) May 22 (2) May 18 (1) May 14 (1) May 10 (1) May 08 (1) May 06 (1) Apr 27 (1) Apr 21 (1) Apr 15 (1) Apr 14 (1) Mar 25 (1) Mar 23 (2) Mar 22 (1) Mar 19 (1) Mar 17 (1) Mar 16 (1) Mar 07 (1) Mar 04 (2) Feb 28 (1) Feb 27 (1) Feb 26 (1) Feb 19 (1) Feb 04 (1) Jan 21 (1) Jan 14 (1) Dec 31 (1) Dec 30 (1) Dec 22 (1) Dec 20 (1) Dec 18 (1) Dec 02 (1) Nov 30 (1) Nov 13 (1) Nov 04 (1) Nov 03 (1) Sep 22 (1) Nov 13 (1) Nov 05 (1) Oct 30 (1) Oct 29 (1) Jul 11 (1)
ATK's Explicit Blog
မွန်းသက်ပန် (ဆေး ၁)
The Mandalay Gazette - Of the Myanmar, By the Burmese, For the Myanmarian...
Thin Zar Wint Kyaw’s fashion from Girl Generation Opening!
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၁၅ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၉)
မယ်သံရဲ့အမှတ်ရ စရာလေးများ
Facebook သုံးသူတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ "ဘ"ခြောက်လုံး
MY NC DIARY
ရှားလော့ မြို့- ပထမဆုံးလွတ်လပ်ရေးကြေညာတဲ့မြို့
ကျွန်တော့် ကဗျာ.....ကျွန်တော့် ကမ္ဘာ
ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်
Myawaddy - မူလစာမျက်နှာ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ထွက်ခွာ
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာများ
" ခွန်းချိုသာ "
More than 2000 FUN stuffs @ Archive
His reaction when the tree falls;(
Painful Feb 2016
ပန်းနွယ်ရဲ့ my NOTEBOOK
မျော .... လွင့် (၂)
စိုးမြနန္ဒာသက်လွင် My Wonderful Moral Thoughts. . . . .
How The Sun See You
My two cents လောကသာရပျို့
Moral value and Rule of law
Dumb short story
2013 typhoon 27 at Okinawa
ပြည် (သို့ ) ပျူတို့ မြေမှထွက်ကျလာသောဝိဥာဏ်....
ကားနံပါတျတှေ အင်ျဂလိပျလို ပွောငျးလဲသတျမှတျပွီ
ayng ko min
အိမ်ဝေးနှင်းဆီ ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ
ယုတ္တိအမှား (၂)၊ မျိုးရိုး
တရုတ်ပြည်သွား မြန်မာများ (၂)
မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ကြယ်ကလေးတွေ..
မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတ္တများ
Rakuten's Ebook Reader - Kobo Touch
The World Sparrow Day - March 20
မရွှေမိ ရဲ့ ဟိုရောက်ဒီရောက်..စကားစမြည်...
...::: ခေတျဟောငျွးမနျမာဂြာနယျ :::...
" colourful Thinking "
Death, does it help us live?
DV lottery 2011 ကို Online ကနေစစ်ရအောင်...
သူကြီး၏ ခပ်ပါးပါး အနုပညာ တစ်ချို့ 
မဗေဒါ ဘလော့ဂ် လင့်ပြောင်းခြင်း
ခိခိရဲ့ Fun For My Friends
ECT သို့မဟုတ် ရှော့ခ်ရိုက် ကုသခြင်း
ကိကီ ရဲ့ Idiotlove
ရွှေဂျမ်း၏ "ပြောပါရစေရှင် ..."
Giant's Free Feeling
Welcome to Our MANDALAY
Imaginary clouds no 2
မြန်မာဘလော့ဂါများ Myanmar Bloggers Dictionary
ငွေလွှဲနှုန်းသိရန် :::::: Mr.Sail0rMoon ::::::
လူပျိုကြီး၏ Calm Hill of My Way ...
S T E V E N A L E X A N D E R
လင်းလင်း Welcome to Our Nattalin Township
Belongings of missthonnthonn
M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я
Jackie Chan's Diary
မိုမိဂျိရဲ့ ပန်းချယ်ရီတို့ ..ပွင့်ရာမြေ ...
My Weekend Meals
ပြည်သူ့လွှတ်တော် - Pyithu Hluttaw
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝဘ်ဆိုဒ်
baby sick (1)
FB updates about kids (1)
ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း (5)
ဆေးပညာလောက - ဆေးပညာကိုစိတ်ဝင်စားသော သူငယ်ချင်းများကို ကြိုဆိုလျှက်
Welcome to Myanmar Health
ဇီဝက (ဆေး-၂) မှ တင်ဆက်သည်
Myanmar Health Care
အလကားရတယ်ဆိုလို့ စမ်းထည့်ကြည့်တာ(18 မတ်လ 2011)
အင်္ဂလန်သွား တောလား - ၄
နှစ်ဖက်ချွန် (အပိုင်း၅) – Kind to Earth
walking around the seine
တနေ့တာ အတွေး ( ၁၈၊၈၊ ၂၀၁၄ )